IMMISA AYUU DIBI, LO'DA, KUBBADDA MIISAANKA: CELCELIS AHAAN - XOOLAHA
Waa maxay miisaanka celceliska lo'da iyo waxa miisaanka ku xiran yahay
Rabitaanka xoolaha caafimaadka leh, iibsadaha wuxuu rabaa in uu helo macluumaad badan oo ku saabsan xayawaanka intii suurtagal ah. Mid ka mid ah tilmaamayaasha ugu muhiimsan ee xaqiijinaya tayada alaabtu waa miisaanka lo'da geeska, sababtoo ah waxay si toos ah ugu tiirsan tahay xaaladda caafimaad ee lo'da, dibi ama dibi, mustaqbalka waxay saameyn doonaan waxsoosaarkooda iyo dhalidda hilibka.
Miisaanka caadiga ah
Miisaanka lo'da (lo'da) wuxuu hayaa macluumaad badan oo loogu talagalay wakiilada xayawaanka. Marka, ogaanshaha miisaanka jidhka ee xayawaanka, waxaa la sheegi karaa xaalada jireed, iyo sidoo kale koritaanka iyo horumarka. Macluumaadka ku saabsan inta culus ee miisaanka ama miisaanka culus waa lagama maarmaan u ah xisaabinta iyo diyaarinta cunto, qiyaas tallaal.
Ma taqaanaa? Xiidmaha lo'da waxaa lagu xisaabiyaa 30% miisaankiisa.
Miisaanka caadiga ah ee lo'da waxaa saameeya.:
Xoolaha, waxaa caado ah in la kala saaro qaybaha kala duwan ee lo'da:
xulasho - miisaanka wuxuu ku jiraa inta u dhaxaysa 450-500 kg;
fasalka koowaad - miisaanka ilaa 450 kg;
darajada labaad - miisaanka lo'da waa 400 kg;
darajada saddexaad - 300 kg.
Haddii celceliska qiyaasta tirada xayawaanka ay aad uga duwan tahay qalad la oggol yahay oo ah 30 kg qof shakhsi ah, tani waxay muujin kartaa cunno khalad ah iyo cunto, iyo jiritaanka cudurrada.
Celcelis ahaan culeyska dibi waa inay ahaataa hal iyo badh hal jeer qiyaasta lo'da, taas oo ah qiyaastii 700-800 kg, halka dibi qaangaar ah oo ah caleenta hilibka ee waaweyn, tilmaan-bixiyuhu wuxuu gaari karaa hal tana xataa xitaa ka badan qiimahaan, oo u dhiganta 1200 kg. Cows
Celcelis qiyaas ah ayaa miisaankeedu yahay 350 kg, laakiin aan ka yarayn, haddii aysan ku daboolin dhagaxyada yar-yar.
Qaadada hilibku waxay miisaankeedu noqonkartaa 700 kg, haddii ay ka badnaayeen laba sano jir waxayna ku hayaan xaalado wanaagsan.
Calaamadee caanahaas: Ceelka, Dutch, Holstein, Ayrshire, Jersey, Aberdeen-Angus, Black-iyo-White, Red Steppe, Kalmyk, Kakhakh, Highland, Yaroslavl, Brown Latvian, Shorthorn iyo Holmogory.
Marka aad dhalaysid, miisaanka duufka waa inuu ka yaryahay 10% miisaanka jirka hooyada, taasoo ah celcelis ahaan 40 kg. Waxay kala duwanaan kartaa waxayna ku xiran tahay miisaanka iyo taranka waalidka ilmaha.
Calooshadu si dhakhso ah ayay u korayaan, sida ilmo dhasha, waa in si joogto ah loo miisaamo si ay u fahmaan inta ay helayaan, hadday wax walba caafimaad qabaan iyo in ay jirto baahi loo qabo in lagu soo rogo isbeddel ku yimaada cuntada digaaga ama lo'da. Da'da 1 bilood, miisaanka kubka cawska waa inuu kordho ugu yaraan 10 kg, celcelis ahaan, waxay helayaan qiyaastii 30 kg, taas oo ah, waxay labalaabaan heerkooda dhalashada. Da'da lix bilood, waxaa loo wareejiyaa cuntada dadka waawayn, oo marar badan, laakiin had iyo jeer mar bishii, waxay cabbirayaan miisaanka.
Sidee ayuu miisaanka xooluhu u kala duwanaan karaa iyada oo ku xiran caanaha
Khabiiro ku takhasusay taranta lo'da iyo xulashadooda, waxay qoondeeyeen kun kalluun oo ah lo'da adduunka oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, dhammaantood waxay u kala qaybsanyihiin saddex nooc oo waaweyn, iyada oo ku saleysan hadafkoodii dhaqaalaha:
hilibka iyo caanaha.
Muuqaal aad u kala duwan oo ah waxyaabaha lo'da ee caanaha loo yaqaan ayaa loo yeeri karaa:
caanaha dufanka sare;
hilibka nafaqada yar.
Waxaa ka mid ah lo'da gudaha ee noocyadan nooca ugu caansan ee gobolkaaga waa:
Steppe Red. Miisaanka, lo'da waxay gaari kartaa 400-500 kg, iyo sida gobalka, waxay dhammaantood yihiin 900 kg;
Madow iyo caddaan. Celcelis ahaan, waxay soo jiidataa nus nus, iyo bohol - 800 kg;
Kholmogorskaya. Celceliska tirada ee lo'da waxay noqon doontaa 500 kg, laakiin wakiilo ka mid ah noocaan ah ayaa ku dari kartaa dhammaan 800 kg;
Golshtinsky. Waxaa lagu gartaa xajmiga xoolaha oo aad u wanaagsan, taniyo lo'da caanahan ayaa leh 650 kg, halka dibi ay ka heli karto tiro dhan ilaa 1200 kg.
Xayawaanka xoolaha ayaa la xiriirta khatarta cudurada sida ketosis, cysticercosis, leukemia, naaso, bararka jadeecada, lafaha jooniska, cagaha iyo afka, ama cudurada hoofka.
Calaamadaha lo'da noocyadaas, waxaad ku wici kartaa sifooyinka noocaas ah sida:
miisaan degdeg ah oo dhakhso ah;
hilibka tayada sare leh sababtoo ah horumarinta gaarka ah ee muruqyada;
dhadhan dheeraad ah.
Ka mid ah noocyada ugu caansan ee hilibka lo'da, waxaad tilmaami kartaa:
Hereford. Lo'da qaangaarka ah waxay noqon kartaa 500-600 kg oo miisaankeedu yahay, iyo dibi - 800-1100 g Qiyaasta Hilibka - 53-65%, in yar ka yar 70%;
Aberdeen-Angus jilicsan. Cawsku wuxuu kaloo helaa 500-600 kg oo miisaankiisu yahay, iyo dibi way yar yihiin - qiyaastii 800 kg. Soo-saarka alaabada - 60%;
Sharolez jilicsan. Qaadi qaangaar ah ayaa helaya 1,200 kg, iyo qaalin - 800 kg, inkastoo xaqiiqda ah inay heystaan ​​hilib badan oo aan ahayn dufan, iyo sidoo kale wax soo saar badan oo hilib hilib ah;
Hilibka Ukrain. Si aad ah u qabqabashada cuntada, sababtoo ah waxay cunaan dhir kasta, iyagoo gaaraya 16ka bilood ee 550 kg. Intaa waxaa dheer, maqaarka lo'da ee caan this waxaa loo isticmaalaa in soo saarista koollo;
Znamenovskaya. Waxay leedahay qaabab yar oo mugdi ah, tan iyo lo'da buuggan ayaa miisaami doona ugu badnaan 550 kg, iyo dibi - 700 kg. Caleenta ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu sameeyo kabo, bacaha.
Hilibka iyo Caanaha
Wakiilada noocyada noocan ahi waxay leeyihiin jidh xooggan waxaana loo isticmaalaa guud ahaan labadaba wax soo saarka caanaha iyo alaabta hilibka.
Waxay ka soo saaraan hilib ka badan caanaha, iyo caano ka badan hilibka. Celceliska miisaanka - ee kala duwan ee 550-900 kg, iyadoo ku xiran dabaqa.
Ma taqaanaa? Cowsku wuxuu celcelis ahaan ku nool yahay labaatan sano, inkastoo ay jiraan kuwo dheer. Bullsadu waxay ku noolyihiin muddo ka yar shan iyo toban sano.
Cuntada KRG iyo caanaha caanaha, kuwaas oo caan ku ah taranka xoolaha, waa:
Madow Cajiib ah;
Maxaa go'aamiya culeyska lo'da
Miisaanka xooluhu wuxuu si toos ah ugu tiirsan yahay shuruudaha dayactirka, iyo sidoo kale raashinka ay bixiso xoolaha. Waxa kale oo jira talooyin ku saabsan taranta iyo daryeelka, taas oo ku xidhan taranka iyo noocyada lo'da.
Sidaa darteed, tusaale ahaan, lo'da noocyada hilibka looma baahna xitaa illaa xad ah, daaq dheer iyo daal badan ayaa ka horjeeda, sababtoo ah waxay lumin karaan miisaankooda. Waxay kugula talinayaan inay ku koraan xaabo.
Hase yeeshee, lo'da caanaha ayaa lagula taliyaa inta badan daaqa daaqsinka leh awooda lagu nuugo hawo geedeed cusub.
Waa muhiim! Deegaanka, cuntada iyo cuntada, cimilada iyo xaaladaha ku jira kaku waxay saameeyaan caafimaadka iyo korodhka macaamilka ee lo'da.
Marka la abaabulayo barnaanta lo'da, taranka muhiimadda ay leedahay:
xaaladaha heerkulka. Guryaha waa inaysan aheyn qaboojiye + 10 ° C, haddii aysan aheyn qabow qabow, ee lo'daha qaangaarka ah iyo +15 ° C for weylaha;
buuq la'aan, jawi deggan.
Waxaa haboon in daaqa la ilaaliyo. Isticmaalkeeda wuxuu ka dhigayaa geedi-socodka wax-soosaarka oo aan qaali ahayn, halka jidhka lo'da uu si buuxda u kobcin karo, dhaqdhaqaaqyadu maaha mid culus, wuxuu neefsanayaa hawo nadiif ah, qorraxda qorraxda. Saameynta faa'iido badan ee socodka daaqa waa caanaha iyo lo'da caanaha.
Quudinta si habboon loo abaabulay waa inay ahaato mid tayo sare leh. Waxaa ka mid ah:
Cunto khudradeed: succulent (cawska, silajka, dalagga xididada), qalafsan (cows, straw), qashin (qashin farsamo, hadhuudh);
sameynta kiimikada iyo maadada kiimikada;
quudinta iyo isku darka cuntada;
fitamiinka iyo macdanta macdanta.
Waa muhiim! Cunto ka timi gabbaldayaha, kalluunka iyo kalluunka caanaha ayaa kordhiya qadarka caanaha, iyo caanaha, roogga iyo roodhada.
Cows Champions: miisaanka ugu sarreeya iyo miisaanka ugu hooseeya
Waa maxay nooca xoolaha xayawaanku diido inuu ku faanto guulaha hawshooda? Waxaa jira noocyo waaweyn oo aad u ballaaran oo lo 'ah, si kastaba ha ahaatee, kuwa ka mid ah wakiillada dunidan xayawaanka waxaa jira kooxo.
Wakiilka ugu weyn ee KRG waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay Donnetto.oo ku noolaa Switzerland qarnigii 20aad. Miisaanka culus - 1740 kg, iyo dhererka dhererka - 190 cm, wuxuu ahaa ilbaxnimo.
Ilaa hadda, wax tani ma ahan mid ku nool England. Wuxuu jilayaa Charolais magaciisa waa Field Marshal. Miisaankiisu waa 1700 kg, waana 190 cm oo dheer.
Giant kale ayaa loo magacaabay Chile, oo ku noolaa Fern (Ingiriiska). Waxaa iska leh jare Freesian, oo ka soo jeeda Porcelain. Miisaankiisu waa 1300 kg
Dhiirigelinta jilitaanka freesian sidoo kale wuxuu miisaankiisu ka yar yahay 1,200 kg wuxuuna leeyahay dhererkiisu 196 cm, dhererkuna waa waxyeello, waa 4.3 m.
Baro naftaada ugu caansan ee noocyada hilibka lo'da ee naas nuujinta.
Hantidhawrka joogtada ah waa muraayad, oo ku noolaa bilowgii qarnigii 20aad. Xogta ay ku qoran tahay "Guinness Book Book of Records", oo ay u egtahay marwalba inay hesho la tartamayaal, sababtoo ah culeyskeedu wuxuu ahaa 2,270 kg. Magaciisu wuxuu ahaa Mount Catadin, waxay ahayd gegada Holstein-Durhmanian. Waxay ahayd 3.96 m oo ah girth iyo 188 cm oo ku yaala dushooda.
Milkiilaha haatan ee horyaalka "giant" waa Cow Big Chow. Wax ka badan mug ee miisaanka iyo 183 cm oo dheer.
Miisaanka lo'da waa mid aad u muhiim ah, maxaa yeelay waxay muujinaysaa xaaladda caafimaad ee xayawaanka. Noocyada lo'da waxay ku xiran tahay lakabkeeda iyo xajiyaddeeda iyo xaaladaha nololeed ay saameyn karaan. Waxaa jira siyaabo badan oo lagu cabbiro miisaanka, maaddaama mawduucan muhiim ah uu ka ciyaarayo door muhiim ah iibsashada lo'da.